အောင်ထွန်းဦး: ဒေါသ တစ်ချက်
ကျွန်တော်က ကားခရေစီပါ…။ ကားချစ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့ဗျာ… ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ကျွန်တော့်မိန်းမရယ်… သားလေးရယ်…ကျွန်တော် အခုစီးနေတဲ့ ကားလေး ရှိရင် ကျွန်တော့် ဘ၀က ပြည့်စုံပြီ…။
တစ်ရက်.... ကျွန်တော် အလုပ်က အတော်ပင်ပန်းလာတယ်..။ စိတ်ပန်း လူပန်း ဖြစ်နေတာကြောင့် အိမ်ရောက်တာနဲ့ ထမင်းစားပြီး ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ပဲ တန်းအိပ်ပြစ်ဖို့ ကျွန်တော် တွေးထားလိုက် တယ်..။ အိမ်ကိုရောက်ပြီး ကျွန်တော့် မိန်းမ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ထမင်းကိုစားပြီး အိပ်ဖို့အတွက် အပေါ်ထပ်ကို ကျွန်တော် တက်ခဲ့တယ်..။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့်မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို မီးဖိုထဲမှာ သံတစ်ချောင်း ရိုက်ပေးဖို့ ပြောလာတယ်..။ ကျွန်တော်လည်း သံရိုက်ဖို့ တူယူလာပြီး မီးဖိုဘက်ကို အလာမှာ အိမ်ရှေ့မှာ ရပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကားအနီးနားမှာ ကျောက်ခဲ တစ်လုံးနဲ့ ကားကို ခြစ်ဆော့နေတဲ့ သားလေး ကို တွေ့လိုက်ရတယ်…။
ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ဆိုး ထူပူသွားပြီး စိတ်ဆိုး မာန်ဆိုးနဲ့ သားလေးရဲ့ လက်ကိုယူပြီး ကျွန်တော် လက်မှာ ရှိတဲ့အရာနဲ့ စိတ်ရှိလက်ရှိ ရိုက်နှက်လိုက်တယ်…။ သားလေးကတော့ ကြောက်လန့်တကြား နဲ့ အော်ဟစ်အော်ငိုနေလေရဲ့..။ ဘယ်လောက်တောင် ဆက်တိုက် ကျွန်တော် ရိုက်နှက်နေမိလဲ မသိတော့ပါဘူး….။ ကျွန်တော် သတိပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် သိလိုက်ရတာက ကျွန်တော် သားလေးလက်ကို ကိုင်ပြီး ရိုက်နှက်နေတဲ့အရာက… မီးဖိုထဲမှာ သံရိုက်ဖို့ ယူလာတဲ့ တူ တစ်ချောင်းးး…။
ကျွန်တော်တို့ သားလေးကို ချက်ချင်းပဲ ဆေးရုံကို ပို့ကြတယ်…. ဆရာဝန်က ကျိုးကြေနေတဲ့ သားလေးရဲ့ ညာဘက်လက်ကို ကြည့်ပြီး "ကလေးက ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲလည်း" ဆိုတဲ့ အမေးကို ကျွန်တော့်မှာ ပြန်ဖြေဖို့ အဖြေမရှိခဲ့ဘူး..။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်က ကျွန်တော့်ကို ခေါ်ပြောတယ်…သားလေးရဲ့ ညာဘက်လက်က စာရေးလို့ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့…။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နောင်တရလို့ မဆုံးဖြစ်မိတယ်..။ ကျွန်တော် ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ထိ ဒေါသထွက် ပြီး သားလေးကို ရိုက်နှက်ခဲ့ရတာလဲ….။ ဆေးရုံကုတင်ပေါ်က သားလေးက ကျွန်တော့်ကို ကြောက်နေတဲ့ ပုံစံပါပဲ..။ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ သားလေးကို ထွေးပွေ့လိုက်တယ်…။ သားလေးက ညှိုးငယ်စွာနဲ့
"သားလက်တွေ ဘယ်တော့ ပြန်ကောင်းမှာလဲ ဖေဖေ" တဲ့..။
ကျွန်တော် ပါးပြင်ပေါ် စီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပြီး အပြင်ပြေးထွက်ခဲ့တယ်..။ ဆေးရုံရှေ့မှာ ရပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဒေါသထွက်စေတဲ့ကားကို စိတ်ရှိ လက်ရှိ ကျွန်တော် ကန်ကြောက် နေမိခဲ့တယ်…။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကားပေါ်မှာ ကျောက်ခဲနဲ့ ခြစ်ပြီး ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းလေး တစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော် တွေ့လိုက်ရတယ်…။
"ဖေ့ဖေ့ကို သား ချစ်တယ်…" တဲ့…
သင်ခန်းစာ ။ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒေါသအလွယ်တကူ ထွက်တတ်ကြပါတယ်..။ ဒေါသထွက်ရင် လည်း လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်တတ်ကြပြီး နောက်မှ ဖြစ်လာတာရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပါ..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တဒင်္ဂဒေါသကြောင့် မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ပြန်ပြီး ပေးဆပ်ရတတ်တယ် ဆိုတာကို သိချင်စေပါတယ်ဗျာ…။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 8:48 AM
*** August 2, 2013 at 1:29 AM
အရမ်းမှန်ပါတယ် အရမ်းလည်းကောင်းတယ် ကျေးဇူးတင် ပါတယ်.
ရှဲဒိုးတော့ မလုပ်နဲ့ ဆရာရဲ့
ကိုယ်ပိုင် idea မှ မဟုတ်တာ ရှက်တတ်စမ်းပါ